Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:7 padiki Monitor,Night Vision Kumashure View Camera Kit,Negadziriro yeparutivi Camera Wireless
Home > Products > Wired Backup Kamera Systems > Wired Backup Kamera System yeMota > kamera yemotokari uye inoratidza system yedhijitari
Yakabatanidzwa Kudzosera Kumusoro Kamera Monitor System-- Iyi seti yewired back up kamera system yakagadzirirwa mota hombe senge Rori / Semi-Ngoro / Bhokisi Rori / RV / Musasa / Bhazi / Van / Mapurazi Mach / Kiravhani / Motorhome / 5th Wheel uye zvichingodaro, iyo fodya yakareruka inopa simba kune ese maviri makamera uye kamera.
Sarudzo iri nani ye7 INCH Monitor-- Ultra Yakajeka Yechokwadi Mufananidzo kubva kuAHD kamera inoratidzwa pane yekutarisa, masimba ane simba anogona kuwanikwa senge auto-kudzima, mufananidzo flip, kupenya kugadzirisa, V1 / V2 switch nekutsikirira mabhatani pane tariso kana kuburikidza chidhiraivho chiri kure. Nzira mbiri dzekumisikidza iwe.
AHD720P Kumashure Kuona Kamera-- Yakanyanya kugadzikana yekutumira chiratidzo uye yakajeka mufananidzo unoratidzwa. Mini saizi, IP68 isina mvura, 720P 1280 * 720 pixels, 1000TVL, 150 madhigirii akafara ekuona angled, yakasimba simbi dzimba. Inogona kushandiswa seyokutarisa kumashure, sideview kana kumberi kuona kamera sezvaunoda.
Kuisirwa Nyore, Hapana Chinopindira Chinopindirana-- Ingo fanirwa kutsvaga nzvimbo yakakodzera yekutarisa uye kamera, ubatanidze neiyo 49FT vhidhiyo tambo ine avhiyesheni 4-pini zvinongedzo zvinovimbisa kugadzikana kwevhidhiyo chiratidzo. Iko kune on / off bhatani pane iyo fodya yakareruka kuti ipe simba kune iyo sisitimu yese.
kutamba kwemotokari kumashure kutarisa kamera chengetedza Mvura isina Wired
kumashure tarisa isina mvura kamera kamera reverse track
backup rear kuwona macamera mota reverse rubatsiro
7 padiki Monitor
Negadziriro yeparutivi Camera Wireless